iTunes Tsy mahalala iPhone? Ity ny antony & Ny tena fanamboarana! - Iphone
inona no dikan'izany rehefa mangidihidy ny tànana havia
maninona no tsy mandefa na mahazo hafatra an-tsary ny findaiko
iphone 5 headphone jack tsy mandeha
iTunes Tsy mahalala iPhone? Ity ny antony & Ny tena fanamboarana!
Ampidiro ao amin'ny solo-sainanao ny iPhone, fa tsy misy zava-mitranga! Na inona na inona antony, tsy hanaiky ny iPhone ny iTunes. Ao amin'ity lahatsoratra ity, aho hazavao hoe maninona no tsy eken'ny iTunes ny iPhone-nao ary asehony anao ny fomba fanamboarana ny olana ho tsara !
Fa maninona no tsy mamantatra ny iPhone ny iTunes?
iTunes dia tsy manaiky ny iPhone anao noho ny olana iray amin'ny tariby misy taratrao, ny seranan-jiro misy ny iPhone, ny port-nao USB an'ny solosainao, na ny rindrambaiko ao amin'ny iPhone na solosainao. Ny dingana etsy ambany dia hampiseho aminao ny fomba fanamboarana ny olana rehefa tsy hanaiky ny iPhone ny iTunes!
Zahao ny tariby taratrao
Mety iTunes tsy manaiky ny iPhone anao satria misy olana amin'ny tariby taratrao. Raha simba ny tariby taratrao dia mety tsy afaka mampifandray ny iPhone amin'ny solo-sainao izany.
Diniho haingana ny tariby misy ny Jiro ary jereo raha misy simba na fraying. Raha mieritreritra ianao fa misy olana amin'ny tariby taratrao dia manandrama mampiasa namana iray. Raha manana port USB maromaro ny solosainao, andramo ny mampiasa iray hafa.
Voamarina ve ny tariby MFi anao?
MFi-fanamarinana dia 'tombo-kase fankatoavana' an'i Apple ho an'ny tariby iPhone. Ny tariby misy taratra MFi voamarina amin'ny MFi dia azo antoka ampiasaina amin'ny iPhone-nao.
Amin'ny ankapobeny, ny tariby mora vidy ho hitanao ao amin'ny magazay dolara eo an-toerana na tobin-tsolika dia tsy voamarina MFi ary mety hiteraka fahasimbana lehibe amin'ny iPhone-nao. Azon'izy ireo atao ny manafana be loatra ary manimba ireo singa anatiny ao amin'ny iPhone.
Raha mitady tariby iPhone voamarina MFi tsara ianao, dia zahao ireo ao anatin'ireo Amazon Storefront an'i Payette Forward !
efijery mikasika tsy mamaly iphone 6
Diniho ny seranan-tsambon'ny helatrao an'ny iPhone
Avy eo, zahao ao amin'ny port ny Lightning an'ny iPhone -raha sakanan'ny potipoti-javatra io dia mety tsy afaka mifandray amin'ireo mpampifandray amin'ny dock amin'ny tariby taratrao.
Makà jiro jiro ary diniho akaiky ny atin'ny seranan-jiro. Raha mahita lint, basy, na potipoti-javatra hafa ianao ao anatin'ny seranan-tsambatra, dia diovy amin'ny borosy anti-statika na borosy nify vaovao, tsy ampiasaina.
sary iphone no tsy afaka mihodina
Fanavaozana ny kinova farany an'ny iTunes
Raha solosaina ianao dia manana kinova iTunes taloha, dia mety tsy hahafantatra ny iPhone-nao izany. Andao hizaha raha misy fanavaozana iTunes misy!
Raha manana Mac ianao dia sokafy ny App Store ary kitiho ny vaovao farany kiheba eo an-tampon'ny efijery. Raha misy fanavaozana iTunes misy, kitiho vaovao farany eo ankavanany. Raha ny iTunes no havaozina dia tsy ho hitanao ny bokotra Fanavaozana.
Raha manana solosaina Windows ianao dia sokafy ny iTunes ary kitiho ny kiheba fanampiana eo an-tampon'ny efijery. Avy eo, kitiho Hijerena ny vaovao farany . Raha misy fanavaozam-baovao azo atao, aorian'ireo bitsika an-tserasera dia manavao ny iTunes!
Mety misy glitch rindrambaiko madinidinika misakana ny iPhone tsy ho eken'ny iTunes. Azontsika atao ny manamboatra ity olana mety hitranga amin'ny alàlan'ny famerenana amin'ny laoniny ny iPhone. Ny fomba famonoanao ny iPhone dia miankina amin'izay iray anananao:
iPhone X : Tsindrio ary tazomy ny bokotra roa sy ny bokotra iray mandra-pahatongan'ilay tsindry hery. Alefaso ny kisary herinaratra havia miankavanana hanidy ny iPhone. Rehefa afaka segondra vitsy dia tsindrio ary tazomy ny bokotra sisiny mandra-pahatongan'ilay sary famantarana Apple eo afovoan'ny efijery.
IPhone hafa rehetra : Tsindrio ary tazomy ny bokotra herinaratra mandra-pahatongan'ny solafaka hiala amin'ny herinaratra miseho. Esory ny kisary hery fotsy sy mena avy eo ankavia miankavanana mba hamonoana ny iPhone. Andraso segondra vitsy dia tsindrio ary tazomy ny bokotra herinaratra mandra-pahitanao ny sary famantarana Apple eo amin'ny efijery.
Raha mbola eo ianao dia manandrama mamerina mandefa ny solosainanao koa. Izy io koa dia mora iharan'ny lozam-pifamoivoizana, izay mety hanakana ny iTunes tsy hahafantatra ny iPhone.
Ataovy azo antoka fa tapanao ny “Matokia ity solosaina ity”
Indraindray ianao dia hahita pop-up izay manontany raha tianao ny 'Itokisan'ny' iPhone ny solosainao. Ity pop-up ity dia miseho foana isaky ny mampifandray ny iPhone amin'ny solo-sainanao vaovao ianao. Amin'ny fahatokisana ny solosainanao dia manome ny iPhone fahaizanao mifandray amin'ny iTunes ianao.
Misy vintana tsy hanaiky ny iPhone ny iTunes satria tsy atokisany ny solosainao. Raha hitanao ny 'Matokia ity solosaina ity?' pop-up, paompy foana fahatokiana raha ny solosainanao manokana!
iphone 7 lamba mainty fa amin'ny
Nipaipaika tsy nahy aho hoe 'Aza Matoky'!
Raha tsy nety nipaipaika ny 'Aza Matokia' ianao rehefa niseho ilay fanavaozana, mankanesa any Fikirana -> Ankapobeny -> Famerenana -> Famerenana toerana sy tsiambaratelo .
Ny manaraka, rehefa mampifandray ny iPhone amin'ny solo-sainao ianao dia hahita ny 'Matokia ity solosaina ity?' mipoitra indray mandeha indray. Amin'ity indray mitoraka ity, alao antoka fa mitendry fahatokiana !
Hanavao ny lozisialy ny solosainao
Ny solosaina mihazakazaka kinova rindrambaiko taloha dia mety mihaodihaody na bibikely kely fotsiny. Ny fanavaozana ny kinova farany an'ny rindrambaiko amin'ny solosainao dia fomba haingana hanandramana sy hamahana ilay olana.
Raha manana Mac ianao dia kitiho ny sary famantarana Apple eo amin'ny zoro havia ambony amin'ny efijery. Avy eo, kitiho Momba an'ity Mac ity -> Fanavaozana ny lozisialy . Raha misy fanavaozana, tsindrio vaovao farany . Raha tsy misy ny fanavaozana dia mandrosoa amin'ny dingana manaraka!
maninona no mafana be ny iphone-ko
Raha tsy manana Mac ianao dia zahao ny lahatsoratray izay mifantoka manokana amin'ny fanamboarana PC . Ny dingana toy ny famerenana ny mpamily USB Apple Device dia afaka manamboatra ny olana indraindray rehefa tsy mahafantatra ny iPhone ny iTunes.
Zahao ny fampahalalana momba ny rafitra Mac na ny tatitry ny rafitrao
Raha mbola tsy hahafantatra ny iPhoneo i iTunes dia misy dingana iray farany famahana olana amin'ny rindrambaiko azontsika raisina. Hizaha ny fampahalalana momba ny System an'ny iPhone na ny Tatitry ny rafitrao izahay hahitanao ny fisehoanao iPhone eo ambanin'ny hazo fitaovana USB.
Voalohany, hazony ny lakilen'ny Option ary kitiho ny sary famantarana Apple eo amin'ny zoro havia ambony amin'ny efijery ary kitiho Fampahalalana momba ny rafitra na Tatitry ny rafitra . Raha milaza Mac momba ny fampahalalana momba ny rafitra ny Mac anao, kitiho ny Tatitry ny rafitra rehefa miseho ny pop-up.
Ankehitriny ianao dia eo amin'ny efijery System Report, kitiho ny safidin'ny USB eo amin'ny ilany havia amin'ny efijery.
Raha tsy miseho eto amin'ity menio ity ny iPhone-nao dia mety misy olana amin'ny fikirakirana fitaovana manakana ny iTunes tsy hahafantatra ny iPhoneo. Mety ho olana amin'ny tariby ataonao, ny port USB, na ny port famandrihana amin'ny iPhone-nao. Hofaritako amin'ny antsipiriany bebe kokoa izany amin'ny dingana manaraka!
Raha miseho amin'ity menio ity ny iPhone-nao dia misy rindrambaiko antoko fahatelo manakana ny iPhone tsy ho eken'ny iTunes. Matetika, ny rindrambaiko an'ny antoko fahatelo dia karazana programa fiarovana. Zahao ny làlan'ny Apple famahana olana eo amin'ny programa rindrambaiko antoko fahatelo sy iTunes ho fanampiana fanampiny.
maninona no maty haingana ny iphone 5-ko
Raha mbola tsy hanaiky ny iPhone ny iTunes dia tonga ny fotoana hieritreretana ny safidy fanamboarana. Amin'izao fotoana izao, manantena aho fa nanampy anao hamaritra ny antony mahatonga ny olana. Raha ny tariby taratrao dia ianao dia tsy maintsy mahazo iray vaovao na mindrana iray amin'ny namanao. Azonao atao ny mahazo tariby fanoloana avy amin'ny Apple Store raha toa ka voasaron'ny AppleCare + ny iPhone.
Raha seranan-tsambo USB izany dia mety mila manamboatra ny solosainao ianao raha tsy misy ny seranan-tsambo USB miasa. Azo atao ihany koa fa ny faran'ny USB ny tariby Lightning an'ny iPhoneo no olana, koa alao antoka fa nanandrana nampifandray fitaovana marobe amin'ny solosainao amin'ny alàlan'ny port USB ianao.
Raha miteraka ny olana ny seranan-jiro ao amin'ny iPhone-nao dia mety mila manamboatra azy ianao. Raha rakotry ny AppleCare + ny iPhone-nao, manomana fotoana any amin'ny Genius Bar ary midira ao amin'ny Apple Store anao eo an-toerana.
Raha tsy saron'ny AppleCare + ny iPhone-nao, na raha mila amboarinao eo noho eo izany dia amporisihinay hanin-kotrana . Puls dia orinasa mpanamboatra on-demand izay handefa teknisianina voamarina mivantana aminao. Hamboarin'izy ireo eo an-toerana ny iPhone-nao ary ny fanamboarana dia hosaronan'ny fiantohana mandritra ny androm-piainany!
Fantatro ianao izao!
iTunes dia manaiky ny iPhone indray mandeha ary azonao atao ny mampifangaro azy ireo amin'ny farany. Amin'ny manaraka dia tsy manaiky ny iPhone ny iTunes, ho fantatrao tsara ny fomba fanamboarana ny olana! Mametraha hevitra etsy ambany raha manana fanontaniana hafa momba ny iPhone ianao.